Alahady 14 Novambra 2021 - FJKM Amparibe Famonjena
Publié le 15 novembre 2021 16 novembre 2021 par Hanitra ROBEL
Ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ny Teny fanevan’ny faha 160 taona. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka:
– Fitanisana ireo hetsika ao anatin’ny iray volan’ny arsiva sy tranombakoka sy fanentanana ;
– Nambara ny toebola tamin’ny herinandro, notanisaina ny momba ny ankizy natao Batisa, ny fiantsoana fanambadiana sy filazana manjo novakiana ;
– Nisy fisaorana noho ny fahatontosan’ny Garden Party sy ny fiombonana Agape omaly sabotsy teny Analamahitsy avy amin’ny Biraom-Piangonana sy ny K160 ;
– Hanomboka rahampitso alatsinainy 15 novambra 2021 ny herinandrom-bokatry ny Sampana Mpanazava sy Tily ;
Ny sabotsy 20 novambra 2021
– amin’ny 8 ora maraina dia hisy ny fivorian’ny Mpihevi-Draharaha ;
– maraina dia hiofana ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny Akany Rainimamonjy ary ny tolakandro no hisy fivoriamben’ny sampana ;
– amin’ny 9 ora sy sasany maraina no Fivoriambe faharoan’ny Sampana Vokovoko Manga ao am-piangonana ;
– amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ny Fivoriambe faharoan’ny Sampana Fifohazana (SAFIF) ao am-piangonana ;
– Ny sabotsy 27 novambra 2021 amin’ny 8 ora sy sasany maraina hatramin’ny 4 ora sy sasany tolakandro no hetsika karakarain’ny SAFIF noho ny faha-30 taonany eny amin’ny masera Androhibe-Analamahitsy. Ny raim-pianakaviana hiaraka amin’ny zanany lahy ary ny renim-pianakaviana hiaraka amin’ny zanany vavy. Misy fisoratana anarana momba izany.
Rehefa izay dia nandray fitenenana ny Loholona Rabako Ralambonirina Jean-Jacques nanao tatitra momba ny dia tany amin’ny Toeram-Panomanana Mpitandrina (TPM) Fianarantsoa. 10 mianadahy no solontenan’ny Fiangonana nandeha tany izay niainga teto ny 29 oktobra 2021. Nisy fiofanana momba ny fahaiza-mitarika sy fitantanana nomena ny Mpitandrina ny maraina. Ny hariva kosa dia fizarana vatsy : kojakoja 41 gony no nozaraina ka rehefa samy nahazo ny anjarany mbola nisy ambiny 3 gony. Mpianatra sy mpandraharaha 92 no nomena Ar 10 000 avy. Misy zanaky ny Fiangonana iray mianatra ao. Nofaranana tamin’ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3 ny tatitra.
Rehefa izay, nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Nanantitra ny fisaorana noho ny fahatontosan’ny Garden Party izy. Nanao antso mba hidirana SETELA sy SEFALA. Nankasitraka, niarahaba, nirary soa sy nankahery ny mpikambana ao amin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala izy. Nisaotra ny Fiangonana koa noho ny asa vavolombelona tontosa tany amin’ny TPM Fianarantsoa. Notohizana tamin’ny fanatitra ny fotoana.
Ny Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 3: 17b. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana:
– Misaotra an’Andriamanitra fa nahitam-bahaolana ny fiara simba ; hatao batisa ny zanany ; nahavita fianarana ; nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ; nahazo fahasoavana, voatokana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny zanany.
– Ao ireo nangata-bavaka ho an’ny fiainan’ny ankohonany; fa hiatrika fandidiana.
– Nisy nanolotra vola 200 000 Ar ho fampitaovana ny Gazety.
Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana izay nohiraina nandritra ny fanantazana ny rakitra sy fotoam-bavaka dia : hiran’ny Taninketsa “MITOETRA SY MIORINA” ; FFPM 808 : 1 “EO AN-TRATRANAO, JESOSY DIA MAHAFINARITRA” ; FFPM 460 : 3 “ARIO NY TAHOTRAO” ; FFPM 625 : 5 “MPAMONJY SOA MALALA Ô!” ; FFPM 487 : 1 “FANAVAOZANA IZAY MAHAGAGA” ; FF7 : 1 “TSY HAINAY NY HANGINA”.
Ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “RAISONAO, RY TOMPO SOA”.no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena. Notohizana ny fotoana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM 177 : 1,2 “RY FANAHY MPANAZAVA MITARIHA”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona, Filohan’ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana (VMFP) sady mpanitsy ao amin’ny Gazety Andrianasy Fanja. Ny Diakona, Filohan’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena sady Tonian’ny Tranokala Robel Hanitra no namaky ny Testamenta Taloha, raha ny Diakona, Filohan’ny Vaomieran’ny Fifandraisana sady mpaka sary no namaky ny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ireto manaraka ireto no perikopa novakiana misesy: Isaia 30: 18-22 ; Lioka 6: 43-49 ; Jakoba 5: 7-11.
Toy izao ny Teny, amin’ny Anaran’ny Tompo: « Koa Jehovah dia mbola hiandry mandra-pamindrany fo aminareo, ary mbola hitoetra any amin’ny avo Izy mandra-piantrany anareo, fa Andriamanitry ny fahamarinana Jehovah; Sambatra izay rehetra miandry Azy. Fa ianao, ry firenena mitoetra ao Ziona any Jerosalema, dia tsy hitomany intsony; Fa hamindra fo aminao tokoa Izy, raha reny ny fitarainanao; Eny, raha vao reny izany, dia hamaly anao Izy. Ary homen’ny Tompo mofo fahoriana sy ny rano fahalahelovana ianao; Ary tsy hiery intsony ny mpampianatra anao; Ny masonao hahita ny mpampianatra anao; Fa na mivily ho amin’ny an-kavanana ianao, na mivily ho amin’ny ankavia, ny sofinao dia handre teny ao ivohonao manao hoe: Ity no lalana, ka andehano. Ary holotoinao ny takela-bolafotsy voapetaka amin’ny sampinao voasokitra sy ny takela-bolamena voapetaka amin’ny sampinao an-idina, ka harianao tahaka ny lamba maloto izany; Mialà amiko! no teny hataonao aminy. […]
Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy na hazo ratsy mamoa voa tsara. Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy manoty aviavy amin’ny tsilo, na voaloboka amin’ny voaroy. Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin’ny rakitra tsaran’ny fony; ary ny ratsy fanahy kosa dia mamoaka ny ratsy; fa amin’ny haben’ny ao am-pony no itenenan’ny vavany. Ary nahoana ianareo no miantso Ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny Teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy: Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ny vatolampy; ary nony tondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny riaka, nefa tsy nahahozongozona azy, satria tsara fanorenana izy. Fa izay mandre, fa tsy mankatò, dia tahaka ny olona izay nanao trano teo ambonin’ny tany, fa tsy nanisy fanorenana; dia namely azy mafy ny riaka, ka dia nirodana niaraka tamin’izay izy; ary loza ny naharavan’izany trano izany. […]
Ary amin’izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihavin’ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin’ny tany ka maharitra amin’izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian’ny Tompo. Aza mifampimonomonona, ry rahalahy, fandrao hohelohina ianareo; Indro, ny Mpitsara efa mitsangana eo anoloan’ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin’ny anaran’ny Tompo no halainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana. Indro, ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan’i Joba ary efa hitanareo ny faran’ny nataon’ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po. »
« Ray masina ô, manamasina anay amin’ny fahamarinana, ny Teninao no fahamarinana ». Amen.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 4 : 2,3 “RY FANAHY O”, toriteny no nanaraka izany.
TORITENY (fintina) Ny Lioka 6 : 46-49 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra androany.
Fampianarana sy fananarana no ataon’i Jesoa ny mpianany eto mba hitoetra tsara ny fon’olombelona sy hankatoavana ary hitandremana ny Teniny. Misy ny trano azo antoka sy ny trano mampidi-doza, araka ny fanoharana hita eto.
1) Ny trano azo antoka
Ny trano azo antoka dia tsara toerana sy mafy fototra, tsy misy atahorana. Izay mitady fahasambarana dia mila manahaka an’i Joba : miaritra sy maharitra na anaty fizahan-toetra aza ny finoantsika.
2) Ny trano mampidi-doza
Natao kitoatoa, alasafay ny fanorenana ny trano mampidi-doza. Ny zanak’Israely na dia efa atoro aza dia mbola mitady ny ratsy ihany, manompo sampy. Noho izany izay miala amin’Andriamanitra dia mila mitandrina, mandinika ny fomba anambarany ny sitrapony mba ho trano azo antoka.
Alahadin’ny fitantanana ny fananana (FIFA) anio izay mieritreritra hoe inona no fototra mendrika. Nanam-pikasana ny Mpitandrina hanorina sekoly rehefa handeha hisotro ronono noho ny hamaroan’ny mpampianatra eto amin’ny Fitandremana. Rava anefa ny fikasana satria lasan’ny kaominina ny tany, soa fa misy sekolin’ny finoana sy saina ary fanahy amin’ny alalan’ny fananan’ny Fiangonana Gazety.
Ny Gazety dia fanorenana, fitaizana, fanabeazana, fampitomboana, fanatanjahana ny finoana ary natao hahasahana ny olona rehetra sy olona manontolo. Ny fahazavan’i Kristy dia aseho ao, izay ahitana finoana, fanantenana, fitiavana. Miraikitra ao am-pon’ny mpianakavin’ny finoana ampandraisina any an-tokantrano ny fananana Gazety satria ao no ifampizarana sy ampitana famonjena. Koa aoka ny mpanoratra hiezaka hanatratra tarigetra.
Maharaka ny lasa sady mitsinjo ny hoavy ny Gazety, mikendry fampandrosoana koa. Tsy mora ny manao izany asa izany kanefa mivoaka isam-bolana ny Gazety – na nandritra ny fihibohana aza – io no ifampifandraisantsika haharaka ny fiainam-piangonana amin’ny lafiny rehetra.
Tohano ny asa, vidio ny Gazety, tapero mihitsy izany, tohano amin’ny vavaka, ny fampitaovana, ny vola. Ho hitantsika ny tombon’ny trano azo antoka amin’ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana.
Nisy feon-javamaneno fohy. Nohirain’ny Taninketsa ny “ C’EST SI BON DE LOUER SON NOM ”. narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavaka koa izy ho an’ny mpitory Filazantsara rehetra, ny kristianin’Amparibe eto sy any ivelany. Eo koa ny tomponandraikitra eto anivon’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala, ny Sampana sy Sampanasa ary Asa rehetra, indrindra ireo manao fankalazana amin’ity taona ity mba ho tanteraka ny fikasana. Tsy diso anjara amin’izany ireo nantsoina hianatra ao amin’ny SEFALA sy SETELA ; ny sahirana hahita vahaolana ; ny marary ho sitrana ; ny mana-manjo hahery sy ireo manana hataka manokana. Ny nanao raki-pisaorana dia voatonona tsirairay. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.
Ny hira FFPM 808 : 1 « EO AN-TRATRANAO, JESOSY DIA MAHAFINARITRA » no nataon’ny Fiangonana nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny teo amin’ny alitara. Nisy teny fanorenana, fanekena nataon’ny ray aman-dreny sy mpiantoka, vavaka nataon’ny Mpitandrina. Notononina tsirairay ny anaran’ny zaza/ankizy nisitraka ny sakramenta ka nametrahan’ny Mpitandrina tanana ny loha. Nomena ny sertifikà. Rehefa izay dia nisy vavaka sy Teny fanomezan-toky. Ireto avy no anaran’ireo natao batisa : Ramilison Antsa Ny Avo ; Ranarison Inay Anh ; Ranarison Anh Thihaly. Nitohy ny fotoana.
Natao avy hatrany ny hira HF 19: 1,3 “HOY NY TOMPO MANDEHANA” raha namonjy ny toerany ny ray aman-dreny sy zaza natao batisa. Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka ANTEMA 5 “INDRO NY ARON’NY MANDANAO”.Nisy vavaka mangina sy Trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 30 minitra ny fotoana. Nisy asa sy fampaherezana taorian’izany.
Nitendry piano : Rabiazamaholy Mahery
Nitendry harmonia : Rajaofetra John
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Vola sy Vaomieran’ny Fifandraisana
Article précédentPrécédent Alahady 07 Novambra 2021
Article suivantSuivant Alahady 21 Novambra 2021